Awoodda Nuklearka, Kiimikada iyo Militariga ee Kuuriyada Woqooyi – Kasmo Newspaper
Awoodda Nuklearka, Kiimikada iyo Militariga ee Kuuriyada Woqooyi
Updated - December 8, 2017 8:11 pm GMT
London (Kasmo), Kuuriyada Woqooyi waxay Maraykanka iyo xulufadiisa Asia, sida Japan iyo Kuuriyada Koofureed, u haystaan in ay tahay halista ugu weyn ee ka soo horjeedda.
Si loo fahmo baaxadda halistaas, waa in la milicsadaa maqaal, Eleanor Albert ay ku qorta Wargayska “Council on Foreign Relations” kuna saabsan awoodda militari ee Pyongyang.
Qoraagu waxay sheegaysaa in Kuuriyada Woqooyi leedahay mid ka mid ah ciidammada, qalab iyo dad ahaanba ugu ballaaran dunida.
In kasta oo Beesha Caalamku muddo dheer ka hor taagnayd, in uu yeesho hub halis ah, Kim Jong-Un, wuxuu fuliyay tijaabooyinka gantaallo badan, si uu u noqdo quwad Nuklear ah, dalkiisana uga difaaci lahaa halista dibadda.
Laga soo bilaabo xabbadjoojintii “Panmunjon” ee la saxiixay 27kii July 1953, dhammaadkii dagaalkii Kuuriya, rejiimka Pyongyang, wuxuu mar kasta ku jiray go’doon, sababta himiladiisa Nuklearka darteed.
Xiisadda Maraykanka kala dhexeysa ee farsamaynta hubka Nuklearka waxay soo bilaabatay sanndkii 2003, markii Pyongyang isaga baxday Heshiiskii NPT (Non Proliferation Treaty) ee xakamaynta hubka Nuklearka.
Maraykanku wuxuu doonayaa in gabi ahaanba K. Woqooi la go’doomiyo, halka Shiinaha, oo in kasta oo uu racsanyahay Qaraarrada Golaha Ammaanka, yahay ilaa maanta saaxiibka ganacsi ee ugu weyn Kuuriyada Woqooyi.
Marka xaaladaha jira la eego, waa maxay awoodda rasmiga ah ee Nuklear, Kiimiko iyo Militari ee Kuuriyada Woqooyi?
Eleanor Albert waxay sharraxaysaa in, rejiimka Pyongyang, isaga oo wali ugu saboolsan dunida, sida Waaxda Pentagon sheegayso, uu haddana 4 dalool oo 1 meel, dakhligiisa GDP (wax-soosaarka gudaha) ku bixiyo agab militari.
Taxliilinta dhacdooyinkii u dambeeyay waxay muujinayaan in hubka Kuuriyada Woqooyi u dhexeeyo 15 ilaa 20 Bambo oo Nuklear ah, laakiin Sirdoonka Pentagon-ku waxay la tahay 30 ilaa 60 Bambo oo Atoomic ah.
Markii Kuuriyada Woqooyi, sannadkii 2006 fulisay tijaabadii u horreysay ee Nuklearka, Golaha Ammaanka Qarammada Midoobay wuxuu ku soo rogay dhowr Qaraar oo cunaqabatayn ah.
Laga soo bilaabo 2006 ilaa maanta, Kuuriyada Woqooyui, waxay hirgalisay 6 tijaabo oo Nuklear ah, oo kala ahaa Otoobar 2006, May 2009, Febraayo 2013, Jenayo & September 2016 iyo September 3, 2017.
Sida uu sharraxayo Jeffrey Lewis oo ka tirsan Machadka fadhigiisu Lonon yahayh, “Middlebury Institute for Strategic Studies”, Pyongyang waxay awood u leedahay soo saarista Bambooyinka “Uranium” iyo “Plutonium” oo ah furaha qaybaha uu ka koobanyahay hubka Nuklearka, iyada oo aan dibadda wax ka soo dhoofin.
Awoodda Nuklearka iyo gantaallada ka sokow, Maraykanku waxay aaminsanyihiin in Kuuriyada Woqooyi haysato hub Kiimika ah, sida Sulfur Mustard, Chlorine, Phosgenetion, Sarin iyo Nerve Agent VX. Waxaa sidoo kale la qiyasayaa in ay haysato, inta u dhexaysa 2,500 ilaa 5,000 oo Tan oo qalab kiimika ah, kaas oo lagu cabbayn karo gantaallada iyo madaafiicda kale ee caadiga ah.
In kasta oo sannadkii 1987kii xubin ay ka noqotay Heshiiskii “Biological Weapons Convention“, waxaa laga yaabaa in Kuuriyada Woqooyi haysato xitaa hubka Biyolojikada.
Militari ahaan, sida ku xusan Warbixinta Wasaaradda Gaashaandhigga Seul ee sannadkii 2016, K.Woqooyi waxay leedahay mid ka mid ah ciidanka caadiga ah (Conventional) ee ugu xoogga badan dunida, oo gaaraya 1,1 malyuun oo askari, lana mid ah 5% dadweynaheeda 28,37 malyuun le’eg.
Xogta Waaxda Difaaca Maraykanka waxaa ku xusan in sannadkii 2016kii, ciidanka K. Woqooyi haystay in ka badan 1,300 oo diyaarado dagaal ah, in ku dhow 300 oo Helikobtar, 430 Maraakiib dagaal, 250 nooca “Amphibious” ee badda iyi berriga, 70 Gujis, 4,300 oo Taangi, 2,500 Gawaarida Gaashaaman iyo 5,500 oo “Rocket Launchers”.
Maanta oo Jimce ah, 8dii Disember 2017 waxaa la soo afjaray Carbiskii wadajirka ahaa ee Maraykanka iyo K.Koofureed bilaabeen 4tii Disember, laakiin halista K.Woqooyi ku hayso Maraykanka waxba, nuxur ahaan, iskama dhimin, sida uu qabo Eric Gomez oo wargayska “The National Interest” ku qoray maqaal dheer.
Qoraagu wuxuu qabaa cunaqabatayn cusub oo Maraykanku soo rogo in ay yare daahinayso oo qur ah dhammaystirka hubka Niklearka ah ee Kuuriyada Woqooyi, laakiin ayan waxba ku kordhinayn muuqaalka istrateejiga ah ee Washington.
Gomez wuxuu ku soo gabagabaynayaa in Hub ka-dhigista Nuklearka, in kasta oo ay tahay hadaf qiime leh, aan laga dhigin shuruud lagu xiro wadahadallada K. Woqooyi, mar haddii difaaca qaranka, Kim Jong-Un wax walba kala weynyahay.
Maraykanka waxaa la gudboon in uu dhagaysto talooyinka Shiinaha, isla markaasna joojiyo dhoollatusyada militari, si Pyongyang loogu qanciyo miiska wadahadallada.